Jowhar.com : Somali Leader News - News: Howl gallo ballaaran oo ka socda xaafada Suuqa Xoolaha
April 23 2014 15:31:02
Howl gallo ballaaran oo ka socda xaafada Suuqa Xoolaha
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa howl galo ballaaran ka wada Xaafada Suuqa Xoolaha, halkaasoo ay gudaha u galeen abaarihii 11-kii barqanimo, iyadoo howl galkan uu ka duwan yahay howl galadii hore.
Wararka ayaa sheegaya in qadka isgaarsiinta Xaafada Suuqa Xoolaha uu maqan yahay, gaar ahaan Anteenada Mobile-ka oo si gaar ah looga jaray, maadaama ciidamada howl gal qorsheysan ku qaadeen.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in gaadiidka AMISOM ee qafilan ay gudaha ugu jiraan xaafada Suuqa Xoolaha, isla markaana ciidamada Milateriga ay guryaha ka baarayaan hub iyo dagaalyahano ka tirsan Shabaab.
Halka howl galka ka socdo ayaa ah dhinaca qorax u dhac Xaafada Suuqa Xoolaha, mana jirto ilaa iyo hada war ka soo baxay Hey'adaha ammaanka oo ku aadan howl galkan goor dhoweyd xaafadaas lagu qaaday.
Xaafadaha degmada Huriwaa ayaa waxaa horay uga dhacay dagaalo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo Al-Shabaab, iyadoo dhowr habeen ka hor la weeraray Xerada Maslaxa oo saldhig ku leeyihiin AMISOM.
Arrinta cusub ayaa ah in qadka isgaarsiinta kaliya ka maqan yahay xaafadaas, iyadoo horay aan loo arki jirin marka howl galo ay sameynayaan ciidamada in hawada laga saaro isgaarsiin xaafad gaar ama degmo ka tirsan Gobolka Banaadir.
master on March 31 2014
0 Comments · 2726 Reads
Jowhar.com730,112 unique visits